UMichael Schumacher (/ ˈʃuːmɑːkər /; isiJalimane: [ˈmɪçaːʔeːl ˈʃuːmaxɐ] (Mayelana nalolu luhlu lomsindo); owazalwa ngomhlaka 3 Januwari 1969) wayengumshayeli waseJalimane wangaphambili owayeqhudelana eFormula One yeJordan, Benetton, Ferrari neMercedes. USchumacher unerekhodi elihlangene lamarekhodi ayisikhombisa e-World Drivers 'Championship kanti, ngesikhathi ethatha umhlalaphansi kulo mdlalo ngo-2012, wayephethe amarekhodi emiklomelo eminingi (91), izikhundla zepali (68) kanye ne-podium finish (155) - esephulwe nguLewis Hamilton — ngenkathi egcina amarekhodi emathanga ashesha kakhulu (77) kanye nemijaho enqotshwe kakhulu ngesizini eyodwa (noSebastian Vettel) (13), phakathi kokunye.
Ngemuva kokuqala umsebenzi wakhe wokugijima ekarting, uSchumacher wakuthokozela ukuphumelela ochungechungeni oluncane lwezihlalo ezincane. Ngemuva kokubonakala okukodwa kweFormula One noJordani kwi-Belgian Grand Prix ka-1991, uSchumacher wasayinwa nguBenetton sonke isizini ka-1991. Uwine iziqu zakhe zokuqala nezesibili zabashayeli ngokulandelana ngo-1994 nango-1995, waqeda kabili ngaphambi kukaDamon Hill owagijima isibili. USchumacher wathuthela kuFerrari ngo-1996, owawina naye izicoco ezinhlanu zilandelana kusukela ngonyaka ka-2000 kuya ku-2004, kuhlanganisa nezicoco zesithupha nezesikhombisa ezazingakaze zibe khona, ephula amarekhodi amaningi. Ngemuva kokuqeda isithathu ngo-2005 nesesibili ngo-2006, uSchumacher uthathe umhlalaphansi kulo mdlalo, yize ngokuhamba kwesikhathi abuye kafushane neMercedes kusuka ngo-2010 kuya ku-2012.
Ngaphezulu komsebenzi wakhe, uSchumacher wayebandakanyeke ezigamekweni eziningi zomjaho eziphikisanayo. Kabili, wabandakanyeka ekushayisaneni emncintiswaneni wokugcina wesizini owanquma isicoco, okokuqala noHill ku-1994 Grand Prix yase-Australia futhi kamuva noJacques Villeneuve ku-1997 European Grand Prix. USchumacher nomfowabo omncane, uRalf, yibo kuphela izelamani abanqobe imijaho kuFormula One nezelamani zokuqala ukuqeda owokuqala nowesibili kulo mjaho ofanayo, okuyinto abayiphinde emijahweni emine eyalandela. USchumacher wahlonishwa ngokucindezela imoto yakhe kuze kube semkhawulweni ngezikhathi eziqhubekayo emijahweni kanye nohlobo lokuqina lokuqina.
Inxusa le-UNESCO, uSchumacher ubambe iqhaza ezinhlelweni zokusiza abantu futhi unikele ngamashumi ezigidi zamaRandi ezinhlanganweni ezisiza abantulayo. NgoDisemba 2013, uSchumacher walimala kanzima ebuchosheni engozini yokushushuluza eqhweni. Wafakwa ekhomeni elalisetshenziswa kwezokwelapha kwaze kwaba ngoJuni 2014. Washiya esibhedlela eGrenoble ukuze aqhubeke nokulungiswa esibhedlela i-University of Lausanne, ngaphambi kokuba adluliselwe ekhaya lakhe ukuze athole ukwelashwa nokuvuselelwa ngasese ngoSepthemba 2014.
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Schumacher&oldid=91336"
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-13 uNcwaba 2021, nge-05:28.